Waxay Samsung ka dacweeyaan inay ku dhawaaqday iska caabin loo maleynayo inay ka jirto biyaha boosteejooyinkeeda oo aan jirin | Wararka IPhone
Sanadihii la soo dhaafay, waxaan aragnay tiro badan oo terminal ah oo bilaabay inay bixiyaan shahaadada IP68 ee bixisa iska caabin ka dhan ah biyaha taas oo noo oggolaaneysa inaan quusinno terminalka illaa mitir iyo badh nus saac ah. Dhibaatadu waxay tahay in shahaadadan aysan daboolayn dhammaan noocyada biyaha.
Tani waxay sababtay in ururo badan oo macaamiil ah oo adduunka ah ay cambaareeyaan inta badan soosaarayaasha si ay ugu xayeysiiyaan aaladooda inay yihiin kuwo aan biyuhu ka madhnayn, taasoo macnaheedu yahay inay ku jiraan biyaha macaan iyo kuwa cusbada. Midkii ugu dambeeyay ee ku soo biira liiska cambaareynta waa Samsung ee Australia.
Sida aan ka aqrin karno Reuters, Guddiga Tartanka iyo Macaamilka ee Australia ayaa dacweeyay shirkadda Kuuriya ku xayeysiiso Galaxy ga sida ugu habboon isticmaalka biyaha hoostooda, sida ka muuqata xayeysiisyada shirkadda halkaasoo lagu muujiyay sida aaladaha loogu isticmaalo biyaha hoostooda barkadaha dabaasha iyo kuwa badda labadaba.
Sida laga soo xigtay komishankan, Samsung si ku filan uma tijaabin saameynta ay ku yeelatay soo-gaadhista barkadda dabaasha ama biyaha badda taleefannadooda casriga ah markii uu sameeyay ogeysiisyadaas, isagoo sheegaya in boosteejooyinkan si been abuur ah loo matalayo maadaama aan la cayimin waqti kasta haddii ay ku habboon yihiin dhammaan noocyada biyaha marka lagu daro inaan la ogeysiin haddii aysan saameyn ku yeelan doonin noocan oo kale ah nolosha taleefan.
Reuters ayaa la xiriirtay Samsung, oo iska difaacday eedeymahan wuxuuna saxeexay inuu ilaalin doono faafinta, dacwaddana ka difaaci doono maxkamada.
Way ka fiicantahay inaadan isku dayin maadaama damaanadku uusan daboolin
Aniga shaqsi ahaan waxaan ku sameeyay tijaabadii la filayay in iska caabbinta biyaha mid ka mid ah terminaalkii ugu horreeyay ee bixiyay, Xperia Z, in kasta oo jiilkeedii saddexaad, Xperia Z3. Barkadda dhexdeeda taleefanka casriga ahi wax iima siin wax dhibaato ah oo xagga hawlgalka ah, laakiin markii aan badda ku dhex isticmaalay, qalabka taleefanka lagu xiro Waxay bilawday inay bixiso dhibaatooyinka isku xidhka ilaa ay shaqada ka joojiso, sidoo kale dekedda lacag bixinta ayaa samaysay.
Haddii aad rabto inaad kula raaxaysato xagaaga iPhone-kaaga barkadda dhexdeeda ama xeebta, waxa ugu fiican ee aad sameyn karto waa iibso dabool na siiya amniga aan u baahanahay si looga fogaado inay u istaagto inay u shaqeyso himilada fudud ee ah inaan sawirro iska qaadno annaga oo ku jirna biyaha dhexdooda, hawen aad u qaali ah
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Waxay ka dacweeyaan Samsung inay ku dhawaaqday iska caabin biyo ah oo la sheegay inay ka jirto boosteejooyinkeeda oo aan jirin